Garoonka diyaaradaha Nairobi oo dab ka kacay iyo rakaabkii iyo duulimaadyadii oo maanta la hakiyey – Radio Daljir
Agoosto 7, 2013 4:06 b 0
Nairobi, Aug 7, 2013 – Maanta oo Arbaco ah waxaa la joojiyey gebi ahaanba duulimaadyadii caalamiga ah ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi, kaasi oo waaberigii saaka dab ka kacay, dabkaas ayaa la soo sheegayaa in uu yahay mid aad u xoogan.
Dab xoogan ayaa la shaaciyey In uu saaka Waaberigii hore ka kacay garoonkaasi Jomma Kenyatta ee magaalada Nairobi, kaasi oo aan ilaa hadda la shaacin waxa uu ka kacay, balse waxaa socda dab damin iyo baaris la xiriirta arrintaan.
Waxaa la daad gureeyey rakaabkii kala duwanaa ee doonayey in ay garoonkaasi ka dhoofaan maanta, iyadoo dib ugu laabtay guryhahooda, Hay?ada gaadiidka Kenya waxay sheegtay in dadka lagu dadaalay in uusan dabku wax yeelin.
Xoghayaha gaadiidka dalka Kenya Michael Kamau wuxuu sheegay in uu dabku yahay mid aad u xoogan balse aan geysan wax khasaare ah oo nafaadeed marka laga yimaado ay gubteen dhismayaal muhiim ah goroonka ka tirsan.
Shaqaalaha garoonka ayaa iyagana la fasaxay waxaana ilaalinaya gudaha garoonka iyo banaanka ciidamada amaanka ee dalka Kenya si aysan dadku ugu dhowaan, Arrintaan ayaan ilaa hadda la xaqiijin waxa keenay balse baaritaano ayaa weli socda.